Wararkii ugu dambeeyey ee ciidamada Soomaalida oo degaano ka qabsaday Cafarta - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee ciidamada Soomaalida oo degaano ka qabsaday Cafarta
Addis Ababa (Caasimada Online) – Waxaa maalintii labaad oo xiriir ah galay dagaalka u dhaxeeyo Soomaalida iyo Canfarta oo ka socdo deegaano ku yaal Galbeedka Gobolka City.
Wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo dagaalka ayaa sheegayo in kuwa Soomaalida ay guul weyn ka gaareyn dagaalka isla markaasna ay isku fidiyeen deegaano hor leh.
Deegaanada ay ciidamada Soomaalida isku fidiyeen ayaa kala ah Roto, Tarayna, ilaa Birta-dheer, kuwaas oo waxyar u jira magaalada Cadayti oo ay ku xoogan yihiin kuwa Canfarta, waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro xoog leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyey dagaalka ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 15 qof halka uu dhaawaca kor u dhaafayo illaa 40 sida ay xaqiijiyeen saraakiil dhinaca caafimaadka ah.
Laba dhinac ee dagaalka u dhaxeeyo ayaa waxaa soo kala gaaray gurmad xoog leh, waxayna ciidamada dagaalamayo u badan yihiin xoolo dhaqato iyo Beeraley.
Dagaaladaan ka socda meelo kamid ah dowlad degaanka ayaa waxaa ay ka dambeeyeen kadib markii maleeshiyaadka Canfarta ay weerareen Shacab Soomaali ah oo degaanadooda ku sugan.
Dowladda Itoobiya weli kama aysan hadlin dagaalka galay maalintii labaad, waxayna dowladda Federaalka culeyskeeda dhan isugu geysay dagaalka ay kula jirto jabhadda Tigreyga ee TPLF oo kusoo wajahan Magaalada Addis Ababa.
Wixii warar ah ee kusoo kordha waxaad kaga bogan doontaan wararkeena dambe inshaa Allah.